वीरगंजप्रति पूर्वाग्रह किन ? ओमप्रकाश खनाल
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्तावीरगंजप्रति पूर्वाग्रह किन ? ओमप्रकाश खनाल
Wednesday, 19 April 2017 13:10	Rate this item
वीरगंज आर्थिक आधारका सन्दर्भमा मात्र नभएर राजनीतिक दृष्टिले पनि रणनीतिक महŒवको स्थान हो। निकट एक वर्षको अर्थराजनीतिक परिदृश्यको स्मरण यसको प्रमाणिकताका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ। यसो त आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य रुचि अवतरणको औजारस्थल पनि यही क्षेत्र बनेकोमा किन्तु–परन्तु आवश्यक परेन। प्रकारान्तरले यी सबै दृश्यावलीले वीरगंज र यस क्षेत्रको आर्थिक–राजनीतिक विशिष्टतालाई नै पुष्टि गरिराखेका छन् । तर विडम्बना यो विशिष्टताको दोहन आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समृद्धिका निम्ति हुन सकेको छैन। दुनो सोभ्mयाउने सन्दर्भमा मात्र बढी दुरुपयोग भएको छ। यो सिङ्गो अर्थतन्त्रकै लागि अभिशाप बन्ने खतरा निकट देखिएको छ। अर्थराजनीतिमा यसका सतही आयामहरू देखा परिसकेका छन्।
आइसीपी र वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहको प्रभावकारितासित सीधा सरोकार राख्ने वीरगंज–पथलैया व्यापारिक सडक स्तरोन्नतिको सफलताले पनि यो क्षेत्रको महŒवलाई बल पु¥याउनेछ । तर योजनामा देखिएका नमूना अवरोधको निरूपणमा सरकार गम्भीर देखिन्न। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई वर्षमा काम सक्ने गरी त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको पथलैयादेखि आइसीपी सम्पर्क सडकसम्मको सडक विस्तारको ठेक्का लगाएकोमा करिब डेढ किलोमिटर सडक विस्तारमा मुआवजाको विवाद छ। समयमैं यसको निकास ननिकाल्ने हो भने यो ठेकेदारका लागि काम अड्काएर राख्ने बनिबनाउ बहाना बन्न सक्छ। यसको सुरुआती सङ्केत देखिइसकेको छ। वीरगंज र आसपासका क्षेत्रको आर्थिक सम्भाव्यतासित जोडिएका काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुस्त गतिलाई सरकारी पूर्वाग्रहको रूपमा हेर्न थालिएको छ। वीरगंज आन्तरिक राजनीतिक आग्रह र बाह्य रुचि अवतरणका लागि मात्र नभएर मुलुकको आर्थिक समुन्नतिको पनि सहज आधार हो भन्नेमा कुनै प्रकारको द्विविधा छैन। बितेको तराई–मधेस आन्दोलनको केन्द्र बनेकै कारण सरकारले यो क्षेत्रको सम्भाव्यता मास्ने आशय राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यदि यसो हो भने त्यो समग्र अर्थराजनीतिकै निम्ति आत्मघाती हुनेछ । सरकारले यो आरोपलाई चिर्दै वीरगंज क्षेत्रको विशिष्टतालाई लक्षित गरी आर्थिक विकासको आधार स्थापित गर्नुपर्दछ।	Read 307 times	Tweet
« वीरगन्ज जन्माउने एउटा ज्यूँदो इतिहासको अन्त्य-गिरीश गिरी Leaveacomment